Action Alerts Archives - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Oktobra 6, 2021 1
Ny fampielezan-kevitra eran-tany momba ny fanabeazana momba ny fandriam-pahalemana dia manome antso amin'ny mpampianatra Afghanistan mba hahafahan'izy ireo mampianatra hatrany. [tohizo ny famakiana…]
Hanohy hiaro an'i Afghanistan ny fiarahamonim-pirenena
Septambra 3, 2021 0
Rehefa tamin'ny 30 aogositra ny filankevi-pilaminan'ny Firenena Mikambana dia nanambara tamin'ny Taliban fa hanaiky hatrany izy io ary handray anjara mavitrika amin'ny toe-draharaha miaro ny zon'olombelona any Afghanistan, dia nametraka ny fanamby ho an'ny fiarahamonim-pirenena ny hanohy sy ny hampiakarana ny hetsika ho fanentanana ny anton'ny olombelona. fiarovana ny vahoaka Afgana. [tohizo ny famakiana…]
Ny olom-pirenena Afghana tandindomin-doza rehetra - vehivavy, lehilahy, ankizy, antitra, ireo manana fahasembanana - dia manan-jo hangataka fialokalofana. Tokony hamoaka azy rehetra isika. Ilaina tanteraka ny fanesorana azy tanteraka sy feno. Ireto misy hetsika tsotra 4 azon'ny tsirairay atao hanohanana ity ezaka ity. [tohizo ny famakiana…]
Loharano hanampiana ireo mpitsoa-ponenana Afghan (Vehivavy ho an'ny vehivavy Afgana)
Aogositra 20, 2021 0
Vehivavy ho an'ny vehivavy Afgana dia nanomana lisitry ny loharanom-pahalalana hanohanana ireo any Afghanistan izay manandrana mahazo toerana azo antoka. [tohizo ny famakiana…]
Antso maika ho an'ireo manam-pahaizana ao Afghanistan, mpianatra, mpanao asa, mpitarika fiarahamonim-pirenena ary mpikatroka mafàna fo
Aogositra 19, 2021 0
Ireo manampahaizana amin'ny risika (SAR), miaraka amin'ny andrimpanjakana avo lenta, ny fikambanana, ny tambajotra ary ny matihanina miahiahy momba ny mpiara-miasa ao Afghanistan, dia mangataka sonia avy amin'ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonina ambony amin'ny taratasy ho an'ny tompon'andraikitra amerikana mandrisika azy ireo handray andraikitra haingana hanampiana vonjeo ireo manampahaizana, mpianatra ary mpiantsehatra amin'ny fiarahamonim-pirenena. [tohizo ny famakiana…]
Antso ho an'ny fiarahamonim-pirenena: Tohano ny UNAMA
Aogositra 17, 2021 0
Ny fe-potoam-piasan'ny Misiona fanampiana ny Firenena Mikambana any Afghanistan dia tapitra ny 17 septambra XNUMX. Ny zon'olombelona sy ny zazavavy Afghana dia mety miankina amin'ny fitohizany sy ny fanitarana azy. [tohizo ny famakiana…]
Izay rehetra azo atao: famporisihana ny hetsika UN & fiarahamonim-pirenena any Afghanistan
Aogositra 16, 2021 0
Ny fiarahamonim-pirenena dia manohy mitady fotoana mety hitondrana mialoha sy fototra hanaovana hetsika misy dikany ho an'ny sain'ny olona ao anatin'ny rafitry ny ONU izay manana ny fahaizany mihetsika ao Afghanistan. Azafady mba vakio ny soso-kevitra farany napetraka tamina taratasy ho an'ny masoivohon'i Kanada any amin'ny ONU ary azafady mba miangavy anao hanao sonia mba hanondroana ny fanohananao. [tohizo ny famakiana…]
Ny fiarahamonim-pirenena dia manohy miantso ny vondrom-piarahamonina manerantany hanao hetsika any Afghanistan
Aogositra 15, 2021 1
Rehefa tafiditra ao anatin'ny fihamafisin'ny taliban ny zava-nanjo an'i Afghanistan, ny Fikambanana sivily iraisam-pirenena dia manohy miantso hetsika mba hanalefahana ny fijalian'ny olombelona ary hitazona hatrany ireo fahafahan'ny fihavanana. Manentana ny mpikambana rehetra ao amin'ny GCPE izahay mba hitady hetsika na hetsika hiantsoana ny governemantan'izy ireo manokana sy ny solontenan'ny Firenena Mikambana mba handray ny anton'ny zon'olombelona sy ny fandriam-pahalemana any Afghanistan. [tohizo ny famakiana…]
Fiantsoana hanao hetsika: UNSCR 1325 ho fitaovana ho fiarovana ny vehivavy Afghana
Aogositra 8, 2021 0
Ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonim-pirenena dia manamafy fa ny zon'olombelona sy ny fiarovana ny vehivavy sy ny zazavavy dia tsy maintsy tafiditra ao anatin'izay fepetra raisin'ny Firenena Mikambana hatao ao Afghanistan. Manasa anao izahay handray anjara amin'ity ezaka ity, amin'ny fanasoniavana an'ity antso ity hiarovana ny vehivavy Afgana, hananganana UNSCR 1325 ho fanao mahazatra iraisam-pirenena azo ampiharina, ary hanome toky fa vonona ny hanaja ireo fotopoto-pitsipika ireo ny mpampandry tany. [tohizo ny famakiana…]